China Volvo engine diesel generator Mpanamboatra mpamokatra sy mpamatsy | Walter
350kva mpamokatra gazoala Shangchai
Vidin'ny FOB: 1.000 $ US - 30,000 / Set
Fahaizana manome:4000 Set / Sets isan-taona
Volvo motera mpamokatra diesel mpamokatra, Ambongadiny isan-karazany kalitao avo lenta Volvo motera mpamokatra diesel mpamokatra Vokatra avy amin'ny Yangzhou Walter Electrical Equipment Co., Ltd. Volvo motera mpamokatra diesel mpamokatra Mpamatsy ary Volvo motera mpamokatra diesel mpamokatra.
Fahaizana manome: 2000 Isan-taona
Mini Quantity: 1 napetraka
Material: Vy sy varahina
Applications: Miteraka herinaratra
Clients: mpamatsy / mpanamboatra / orinasa / orinasa / mpaninjara / mpiasa / mpampiasa farany
Marketing faritra: Azia, Afrika, Eoropa, faritra Arabo
Torolàlana ho an'ny maotera Volvo Diesel Generator, azafady tsindrio ity hery manaraka ity.
50HZ Volvo maotera Diesel Generator
60HZ Volvo maotera Diesel Generator
Ny orinasa mpamokatra herinaratra Walter dia afaka manome hery miorina amin'ny sehatry ny herinaratra rehetra (toy ny Railway, Mining, Hopitaly, solika, petrifaction, fifandraisana, fanofana, governemanta, ozinina ary trano sns.)
Walter Generator – mpamokatra volvo dia mandray ny motera volvo ho heriny, manana herinaratra eo anelanelan'ny 68kva ka hatramin'ny 500kva, Volvo any Suède manana tantaran'ny 120 taona mahery, dia mpamokatra motera manana tantara lava indrindra eto an-tany. Mandraka ankehitriny, ny maotera nametraka vokatra mihoatra ny 1 tapitrisa napetraka, izy ireo no hery manosika idealin'ny famokarana herinaratra. Ny maotera Volvo dia manana fahaiza-manao avo lenta ary koa fampisehoana hatsiaka haingana sy azo itokisana.
Ho an'ny marika alternator dia manana alternatera marika Stamford, Marathon ary China ho an'ny safidin'ny mpanjifa malalaka isika.
Endri-javatra VOLVO GENERATOR
1. hery mahery, fampisehoana azo antoka
2. asa tanana vita amin'ny vy sy loko avo lenta
3. fandidiana mora sy azo antoka
4. famolavolana famenoana solika tsotra
5. tontonana fanaraha-maso lalina DSE3110 ranomasina toy ny fenitra, Panel fanaraha-maso AMF DSE7320 ranomasina lalina & Smart HGM6120 ho an'ny Safidy, ATS ho an'ny Safidy
1. fenitra famoahana EU
2. Serivisy fiantohana iraisam-pirenena
3. Fotoana fohy fandefasana
4. Orinasa mpivarotra varotra mivantana, miantoka ny kalitao sy ny vidin'ny mpamokatra mora vidy, ahazoana mpanjifa farany tombony bebe kokoa
5. Miaraka amin'ny fanamarinana ISO9001 CE SGS BV
6. Generator diesel Ny ampahany mora dia azo avy amin'ny tsena manerantany miaraka amin'ny vidiny mirary lavitra
7. Tambajotra tonga lafatra aorian'ny serivisy
Generator Model Gengerator Prime Hery Gengerator Standby Power Engine Volvo Engine Volvo Stamford Alternator L * W * H Weight
KVA KVA Modely maotera Modely maotera vaovao Modely Alternator MG kg
Walter generator set Mampiasa ny vokatra avo lenta, aza raharahiahy ny antsipiriany rehetra, mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny genset ilainao.
Volavola → totohondry CNC → fehikibo → fanandramana → famoriana → famafana → mpamokatra vonona → famonoana → fanaterana
Manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny fivoriambe ary alefaso ilay singa, ny dingana rehetra takianay amin'ny mpiasanay hifehy tsara ny kalitao, mba hahafahan'ny singa tsirairay aterina tsara.
Serivisy an-tserasera 24 ora
Hovaliana mandritra ny adiny 1 ny fanadihadiana
Herintaona na 1000 ora fiasana ny Warranty, izay voalohany
Misy CKD sy SKD
Mora azo ny ampahany amin'ny generator
Mandritra ny fanitarana hatrany ny tsena anatiny dia aondrana any Etiopia, Algeria, Polonina, Mexico, Bolivia, India, Nouvelle Zélande, Ekoatera, Rosia, Filipina, Vietnam, Libya, Ghana, India, Emira Arabo Mitambatra, Arabia Saodita, Syria , Brezila, Nizeria, Afrika atsimo, sns. Manana anjara lehibe amin'ny tsena manerantany izahay ary manana laza ambony eto amin'izao tontolo izao.
Serivisy mialoha ny varotra:
1. Fifidianana maodelin'ny fitaovana;
2. Fitaovana famolavolana sy fanamboarana mifototra amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana.
Mandefa mpiasan'ny serivisy manokana aorinan'ny varotra ho an'ny inatallation sy debugging eo an-toerana ary koa fiofanana ho an'ny mpiasa.
1. Teknisiana matihanina sy ekipa serivisy aorian'ny varotra misy serivisy 7/24 hamahana ny olanao;
Walter nandritra ny 13 taona nosedraina sy niatrika zava-tsarotra, miasa mafy sy hatsembohana izahay hahazoana ny karazan-tsoratry ny indostria, alalana.
Antsipirian'ny fonosana: Fonosana Genaral na tranga plywood
Andininy fanaterana: Nalefa tao anatin'ny 10 andro taorian'ny fandoavana
Raha tianao ny vokatray dia mifandraisa anay fotsiny.
Ny fahafinaretako hanome anao ny vaovao rehetra ilainao sy mirindra.
Any amin'ny tanànan'i Yangzhou, Sina izahay no misy. Tongasoa eto hitsidika anay!
Raha liana amin'ny orinasanay bebe kokoa ianao dia tsindrio azafady ny sary etsy ambony.
Tompoko malala na mpitantana mpividy:
Misaotra tamin'ny fotoana namakianao tamim-pitandremana ny tranokalan'ny mpamokatra diesel, raha manana ny endriny manokana na ny antsipiriany takiana aminao ianao dia afaka mandefa anay ny mailaka.
Raha tsy fantatrao ny pitsopitsony manokana dia azonao atao ny milaza aminay ny zavatra takinao, toy ny herin'ny generator, ny herinaratra ary ny fahita matetika, firy ny sety? Izy io dia ampiasaina amin'ny orinasa na ascenseur na fitaovana hafa? Mba hahafahanay manome torohevitra iray ho anao.
Ary ianao dia tokony hilaza aminay hoe avy aiza ianao, mba hahafahanay manamarina ny herinaratra sy ny fahita alohan'ny famokarana.
Pls mandefa mailaka any amin'ny walterxinyi@gmail.com
Misaotra anao indray amin'ny fotoananao ary manantena fiaraha-miasa miaraka amin'ireo tsena lehibe mpamokatra gazoala
Walter Electrical Equipment no misy ao amin'ny tanànan'i Yangzhou dia iray amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy herinaratra diesel ao Shina, ary amin'ny maha orinasa matihanina antsika, dia manana orinasa mpamokatra manokana izahay, izay afaka mamokatra mpamokatra gazoala maotera 85kva Volvo tsara indrindra, motera diesel 100kva Volvo generator, motera diesel 130kva Volvo, mpamokatra diesel 150kva Volvo, mpamokatra diesel 188kva Volvo, mpamokatra diesel 200kva Volvo, mpamokatra diesel 250kva Volvo, mpamokatra diesel motera 325kva Volvo, mpamokatra diesel milina 400kva Volvo, mpamokatra diesel 400kva Volvo, Motera diesel 450kva Volvo, mpamokatra diesel 500kva Volvo, mpamokatra diesel 570kva Volvo, mpamokatra diesel 625kva Volvo, China, mpanamboatra, mpamatsy, orinasa, orinasa, ambongadiny, mividy, mpivarotra, mivarotra, mora, manome, mizara
Previous: 50GZ 600kva motera famokarana gazoala Volvo
Manaraka: Mpamokatra gazoala 120kva Yuchai
60HZ 45kva maotera génium Cummins
20KVA-1600KVA mpamokatra gazoala Cummins